Jibriil Yoonisow Haday Dhabaqday . Qalinkii Cabdale Sigad | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Jibriil Yoonisow Haday Dhabaqday . Qalinkii Cabdale Sigad
Posted by admin on August 25th, 2017 08:03 AM | FADHIGA SUBULAHA
Beri hore ayuu moron dhexmaray wiil iyo aabiihii dabadeedna waxa inuu gartii qaado doonay wiil uu odaygu soddog u ahaa.
Hadaba odaygu gaangi ayuu lahaa waxana uu qabay islaan carab jalaqo leh, markii gartii la furay ayuu ninkii garta qaadayay ee soddoga loo ahaa waydiiyay odaygii waxa uu bi’iyay wiilka uu aabaha u yahay ama dhexmaray.
Dabadeed odaygii soddoga ahaa ee gaangida lahaa ayaa inuu hadlo doonay waxana uu yidhi waar wiilkaygu (waa waa waa waal ca ca ca ca,) markuu intaa marinayo hadalkii ee aanu wali dhamaystirin ninkii soddoga uu u ahaana aanu wali fahmin hadalkiisa ayay islaantii odaygu qabay ee carab jalaqada lahayd intay aqalka kasoo booday tidhi waar ninku waa (WAALI CAADH) buu kuleeyahay odaygu iyadoo ujeeda (WAALID CAAQ) rabtana inay hadalka odaygeedu ku margaday wiilka xilka ku leh fahamsiiso.
Hadalkii soddohda ayaa wiilkii ay soddohda u ahayd afkala qaad ku noqday, dabadeedna wiilkii oo aad u naxsan ayaa yidhi haday dhabaqday xaajadii, isagoo layaaban (WAALI IYO CAADH) iyo waxa lama filaanka ah ee islaantii soddohda ahayd afkeeda kasoo baxay.
Ujeedada iyo dulucda hadalkayga waxan uga socdaa beryahan waxa soo kordhay arimo ceeb iyo fadeexad ay dad badani u arkaan quseeyana magaca aan meeshan ku xusey ee JY.
Dadku kolay inay kala afkaar duwanaadaan ma xuma laakiin in la is indha tiro oo jujuub iyo anaa idhi iyo nin jeclaysi wax lagu meel mariyo waa arin qaldan, koox iyo shaqsiyaadna maaha inay isku dayaan inay wax afduubaan.
Tusaale ahaan Mudane Cabdirashiid xassan mataan ayaa dhawaan waddani iska casilay, inkastoonan ogayn sobobaha uu iskaga casilay haddana xaq ayuu u leeyahay inuu iska casilo xisbigaa qalad iyo saxba, manna sheegin Cabdirashiid inuu ku biirayo xisbi kale.
Balse dadkale oo sheegay inay la fikir yihiin Cabdirashiid Xassan Mataan ayaa markiiba ka dhawaajiyay inuu Cabdirashiid Kulmiye ku biirayo codka beesha Jibriilyoonisna uu halkaa marinayo .
Haddaba iyada oo aanay dadku wali fahmin ujeedada iyo damaca Cabdirashiid Xassan Mataan hadana nimankaa yidhi Kulmiye ku biir ama Kulmiyuu ku biirayaa Cabdirashiid waxay kadhiganyihiin soddohdii waxa xilkale ka dhawaajisay ee tidhi (WAALI CAADH)
Waxanan jeclahay inaan waydiiyo raga Cabdirashiid dhinaca Kulmiye usii galbinaya, Waddani hadii laga cawday Kulmiye miyaanu ahayn kii sideedii sanno ee la soo dhaafay Jibriil Yooniska la sheegayo dhulka jiidjiiday?
Imisa nin oo Jibriil Yoonisa ayaa looga dacareeyay mansab ?
Imisuuse Kulmiye intuu ku shaqaystay rag JY sidii shaadhadhka kala badalay ?
Imisaase jeelasha lagu guray?
Maxaase kulmiye iska badalay?
Cabdirashiid Xassan mataan inkastoonan aqoon u lahayn hadana ma filayo inuu Kulmiye oo aan wadda ogayn uu cod u raadsho ama uu iska xaadiriyo balse hadiiba ay dhacdo inuu ku biiro Kulmiye kama duwanaan doono kuwii horay loo bahdilay waxanan kula talin lahaa Cabdirashiid dadku inta badan kugu raaci maayaan inaad Kulmiye ku biirto sharafna waad ku dhex leedahay dadka ee iska sug inta doorashadu ina dhaafayso waxna isbadalayaan mar hadaad xisbiyadii macaaridka ahaa fahmi wayday.
Waxanan kaa dardaari lahaa cabdirashiidow inaad kamid noqoto kuwii Wasiir Cali Xaamud Sheegay ee mabda ii ay 20ka sanno diidanaayeen hada qaatay ee Kulmiye ugu tagay isaga iyo kuwii ku soo dhididay.
Gabagabadii cid xumee malihi siyaasi Cabdirashiidna sharaf ayuu iga mudanyahay laakiin maadaaba aan ka mid ahay bulshada la magac dhabay xaq ayaan uleehay inaan fikir kayga dhiibto, waxanan kusoo koobayaa KULMIYE waa kii aan ogayn uun ee yaan la qaldamin bulshooy.
« Laptop(computerka fudud ) ee ugu fiican 2017 , Maxaadse ku dooran lahayd markaad iibsanayso
Dilalka Inamada Soomaalida ee qurbaha / Murdered Somali youth Survey. Sheekh Said Ali Ahmed »